राजनीति – Page2– America Nepal
पुर्व राष्ट्रपतिकी छोरीको यस्तो व्यंग, भनिन्– ‘नेपाली टोपी लगाउँदैमा नेपाली हुँदैन’
काठमाडौँ ३ असार । गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै भारतको पश्चिम बंगालमा चर्किदै गएको आन्दोलनप्रति पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवकी छोरी अनिता यादवले कटाक्ष प्रहार गरेकी छिन् । उनले दार्जिलिङमा नेपाली भाषा बोल्नेहरु र नेपाली टोपी लगाउनेहरु नेपाली नभएको भन्दै कडा शब्दमा टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दार्जिलिङमा नेपाली भाषीले आन्दोलन गर्दा समर्थन गर्ने
हिजो सहमति गरेर आज आन्दोलन जारी राख्ने राजपा? – निधि
हिजो मात्रै सरकारसँग २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आज फेरि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्नु बेठीक भएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले हिजो राजपाकै सहमतिमा सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै आज फेरि आन्दोलन जारी राख्ने भनी निर्णय गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए।
एमाले नेताको भाषण सुनेर वृद्ध आमाको आँखामा आँसु
टेकेन्द्र बस्याल कोहलपुर— बाँके क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद दलबहादुर सुनारले बिहिबार कोहलपुर नगरपालिकास्थित हवल्दारपुरमा आयोजित नेकपा एमाले पार्टी उम्मेदवार आमसभा कार्यक्रममा वृद्धवृद्धा भावुक बने। उनका भाषणमा सहभागी ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धाका आँखाबाट आँसु झरे। आमसभाको अग्रभागमा बसेका दर्जन वृद्धवृद्धा सांसद सुनारको भाषणबाट भावुक बनेर रुन थालेका थिए।
एमाले आक्रोश– लोकतन्त्र रोज्ने कि शेरबहादुर ?
काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव स्थगित गरेकोमा एमाले आक्रोशित भएको छ । एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र समाप्त पार्ने बाटोमा हिँडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेला मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “देशमा शेरबहादुर देउवा र लोकतन्त्र सँगै अघि बढ्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।”
पूर्वी नेपालमा सामान्य प्रभाव रहेको संघीय लिम्बुवान पार्टी यतिबेला छिन्नभिन्न भएको छ । खगेन्द्र माखिमको नेतृत्वमा एउटा समूह उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा समाहित भएको छ । कुमार लिङदेनले राजपासँग गठबन्धन गरेर लिम्बुवान बन्द लगायतका चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, उनकै कार्यकर्ताहरु ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन् ।
मधेशमा आक्रोश ! राजपाका नेतालाइ आफ्नै कार्यकर्ताले लखेट्ने !
स्थानीय तह निर्वाचन बिरुद्ध राजपाले मसाल जूलुस देखि आमहड्तालसम्मका कार्यक्रमहरु ल्याएपछि मेधशि जनता आक्रोशित भएकाछन् । उनिहरुले अब राजपालाइ बहिश्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएकाछन् । स्वार्थको राजनीति गरेर आफूहरुलाइ प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोजिएको भन्दै मधेशी नेताहरुलाइ गाँउ नपस्न चेतावनी समेत दिएकाछन् । सिरहाका अभिषेक देबले निर्वाचनको तयारीमा
सजायबाट उम्काउन अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिलकै मिलेमतो?
कानुनमा जे लेखिएको भए पनि र सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गरेको भए पनि नेपालमा प्रहरी प्रशासनले नचाहँदासम्म अपराधीले पनि सजाय भोग्न पर्दो रहेनछ । सुडान घोटाला नामले कुख्यात भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भइसके पनि भ्रष्टाचारी ठहरिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू पक्राउ परेका छैनन् । त्यतिमात्र हैन उनीहरूको घरेलु कामदारसरह कामकाज गर्न राष्ट्रको
संसदमा भरतपुर घटनाको बहस : ओलीको तर्क, दाहालको आक्रोश, देउवा माैन
काठमाडौं— प्रधानमन्त्रीका एक मात्र उम्मेदवार देउवाले आफू किन प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर नयाँ कुरा सुनाउलान् देलान् भन्ने थियो। संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अघि संसदलाई सम्बोधन गर्न आएका उनले भोट मागेनन्। न त आफ्नो सरकारले के गर्नेछ भनेर योजनै सुनाए। बरु भने, ‘मेरो उम्मेदवारी किन भनेर बोलौंला भनेको थियो। ओलीजीले यति धेरै सवाल उठाउनु भयो कि पहिला त्यतै जाऊ।’ हुन
धेरै बाठो बन्न खोज्दा यसरी चिप्लिए ओली !
काठमाण्डु, १८ जेठ–एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले ज्योतिषी हेराएर असार १४ का लागि दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन मिति तोकेको आरोप लगाएका छन् । ज्योतिषीले असार १४ मा पानी पर्छ भनेपछि सोही दिन निर्वाचन मिति तय गरिएको आरोप उनको थियो । सरकारले मुस्लिम समुदायको रमजान पर्व पर्ने भन्दै ९ असारको निर्वाचन १४ गतेका लागि सारेको थियो । यसअघि उनले रमाजानका बेला निर्वाचन गराएर
काठमाडौं महानगरका निर्णय – बिहानै फोहोर उठाउनेदेखि घरमै चिकित्सक पठाउनेसम्म
काठमाडौं, जेठ १७ – काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले काठमाडौंलाई सफा राख्ने ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पदभार ग्रहण गरेपछि बुधबार बेलूकी बसेको पहिलो बोर्ड बैठकले काठमाडौंलाई सफा राख्न ‘क्लिन द सिटी’ अभियान सुरु गर्ने, बिहानै सबै फोहोर व्यवस्थापन गरिसक्ने, नेपालीसंगै नेपाल